Ukubhekana Negaxekile Enonya - Yenza umkhuba kusuka ku-Semalt
amabhuzu angenawo irekhodi elihle kakhulu. Ziyashesha futhi ziphumele inaniizivakashi zabantu kwiwebhusayithi. UMichael Brown, iMenenja Yempumelelo Yekhasimende i-Semalt ,uxwayisa ukuthi i-bots ithola kulula ukudoba amasayithi aphephile ngenhloso yokuwahlasela, ukugaxeka izinhlelo zokuphawula, nokubangelaukudideka ezinkambisweni zokubika emgwaqweni. Ukunyuka kokudluliswa okunonya kuyinkinga enkulu, futhi izitayela ze-Google zibonisaukuthi inkinga ikhuphuka ngokuzenzekelayo.
I-Googlebot ibhodi enhle
Inhloso eyinhloko ye-Bot ukukwenza imisebenzi ngokuzenzakalelayo nokuziguqula njengesivakashi. Bashayaamakhodi womthombo, ukuqoqa idatha, nokwenza imisebenzi ekuphenduleni lokho abakutholayo. Noma kunjalo, okuningi lokhu kuzwakale kabi, akuzona zonkekubi. I-bot bot i-Google yenza ukuba khona kwayo kwaziwe kubasebenzisi futhi kusiza amawebhusayithi amawebhusayithi ku-SERP. Ezinye i-bots zisebenzise lokhu futhi zisebenziseizintambo zama-fake ze-fake okwenza kubonakale sengathi zivela kulolu bot.
I-Bad bots ne-referram spam
Izintambo ezimbi zifakaza okuqukethwe kwewebhusayithi, zibambe imininingwane yomsebenzisi, chofoza ukukhwabanisa ngokomthethoizikhangiso, kanye nokulahla imibiko eyenziwe yi-Google Analytics. Into yokugcina kulolu hlu ithinta kakhulu iwebhusayithi. Imiphumelakusuka ezinhlokweni ezihlukahlukene ezinonya zokuthunyelwa kogaxekile. Isibonelo, zihlanekezela idatha yethrafikhi kusukela ekukhuphukeni kwamandla okudala, ukukhohlisaabasebenzisi ukuvakashela amasayithi avela emibikweni ye-Google Analytics, evumela ukuba benze izixhumanisi emuva. Njengoba beza befihlekiletraffic, kufanele bakwazi ukufihla abathumeleli.
Ugaxekile lokudluliselwa kabusha lunamaphesenti angu-100 ahlawula amazinga, futhi izikhathi ezikhawulelwe ezisekhasini, okuvame ukubanjwaidatha kumbiko. Ngenxa yalokho, umkhiqizo wokuphela wale mibiko ngokuvamile awuvumelekile. Phakathi neminyaka, i-bots isiyinkimbinkimbi kakhulu..
Abahlaseli basebenzisa ama-botnets ukwenza ukuhlaselwa okunzima. I-botnet iyinethiwekhi yamarobhothiokwenza kube nzima ukulandelela kanye nama-IP we-blacklist. Kuba nzima ukuvikela iwebhusayithi uma zisebenzisa i-Distributed Denial of Service.Uma umuntu ephakamisa noma evala eyodwa, amanye amaningana akhula endaweni.
Iningi lamawebhusayithi okwamanje unayo ikhodi ye-Google Analytics eqondile kubo. UkudluliselwaI-bots ingakwazi ukukhipha ikhodi ehlukile ye-UA kusuka kukhodi yomthombo bese ukuyisebenzisa ukulandelela isayithi. Kusukela ngaleso sikhathi kuya phambili, kuba lula ukuthumela ulwazikuya ku-GA, ngaphandle kokuthi uvakashele. Basebenzisa inqubo ye-Google Analytics Measurement Protocol, engacacisi noma iyiphi idatha ezayokuwo.
Ukumisa ugaxekile we-Ghost Referral
Abasebenzisi banganaki ukuhanjiswa kweghost futhi babuyisele ubuqotho bemininingwane esetshenziselwa ithrafikhiimibiko. Isihlungi segama lomsingeli yindlela eyodwa yokuphathelene nalokhu, njengoba kuqinisekisa ukuthi kuthatha kuphela ulwazi oluvela kumawebhusayithi asemthethweni. Njaloisilinganiso esendaweni, zonke izimo zokudlulisa, zihamba phambili, azibonakali kumbiko wokuhlaziya. Akusiyo isisombululo esingunaphakade, njengoba abaduni befikaUmoya wezinyathelo ezithintekayo wenziwa.
Ukuvimba ukugaxeka okujwayelekile okufakiwe
Ezimweni eziningi, amawebhusayithi abika umsebenzi nge-bots othomathikhi kusayithi lawo. Lezi zingaphezulukulawulwa ngokusebenzisa izindlela zendabuko zokuvimba ugaxekile. Uma umuntu ekhetha ukusebenzisa i-Google Analytics, inqubo ingaba yinde futhi iphelele. AnUhlelo lokuvimbela othomathikhi yiSuwebhusayithi Ye-Firewall Ye-Website, okukhethwa kukho imithetho yangokwezifiso okukhethwa ngumsebenzisi.
Ikhulu lama-21 laphakamisa ukukhishwa kokuphepha okwehla. Ngezinye izikhathi kuyadabukisakufanele sibhekane nogaxekile. Kodwa-ke, abantu kufanele baqale ukujwayele ukuthatha izinyathelo ukuqinisekisa ukuthi bavikela idatha yabo yonke indlela.